Archive du 25/05/2012
Free FM, Tiko, FJKM, �Gros bras�� �Ampangaina aho ��, hoy i Hajo Andrianainarivelo
Vahiny hisokela anio ny Praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy fanajariana ny tany (VPDAT), Andrianainarivelo Hajo. Voatonona amin�ireo raharaha mafana maro ny anarany. Tsy vitsy rahateo ireo mpanao politika na ao anatin�ny fitondrana aza no manana olana aminy. Ao anatin�ity resadresaka ity no hamaliany ireo fanontaniana napetraka taminy.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Ny fifidianana no vahaolana
Nanitrikitrika tanteraka Raveloson Louis De Gonzague mpitarika ny "Komity Miaro ny Demokrasia" fa ny fanatanterahana ny fifidianana haingana no vahaolana hivoahana amin�ity krizy lavareny ity.
Ilaina ny fahasamihafan�ny hevitra
Niaiky ny praiminisitra Omer Beriziky omaly, nandritra ny fihaonany tamin�ny mpanao gazety teny amin�ny Lapan�i Mahazoarivo fa tena misy ny tsy fitoviam-pijery eo aminy sy ny filohan�ny tetezamita amin�ny lafin-javatra sasany.
Nihaona tamin�ny filohan�ny SADC
Araka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin�ny fiadidiana ny tetezamita dia nandao an�i Madagasikara omaly maraina ka nihazo an�i Angola ny filohan�ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina.
Rakotomanga Lanto �Aleo ny vahoaka no hitsara�
Hita avy amin�ny fanambarana nataon-dry zareo avy amin�ny fiaraha-monina sivily sy ireo manampahaizana mikasika ny fifidianana tao ho ao, hoy Rakotomanga Lanto, fa mijery ny vahoaka ry zareo.
Mba nametraka fanontaniana koa ny Praiministra Beriziky
Tamin�ireo fanontaniana napetrak�ireo mpanao gazety am-polony tao anatin�ny adin�ny roa latsaka kely niarahan�ny Praiministra sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky ao amin�ny �cellule de communication�ny Primature� nisakafo maraina tamin�ny ankolafina mpanao gazety marolafy misy eto an-drenivohitra, teny amin�ny Lapan�I Mahazoarivo omaly, dia mbola ilay Omer Berziky mandamina tsy taitra tsy maika (nefa tsy tara ?) sady dipl�maty no natrehan�ny rehetra.
Nanome 20.000Ar isam-bolana ho an�ny sefo Fokontany ao Toliara
Tsy atao resaka ambony latabatra fotsiny ny maha tomponandraiki-panjakana.
Misy hetsika hafa mipoitra
Mihazakazaka ny fandehan�ny raharaham-pirenena ka mivoatra manaraka izany koa ny any amin�ny faritra.
Manerana an�i Madagasikara ny fitokonana
Raha ny tatitra nataon�ny sendikan�ny Paramed dia samy nanaraka ny toromarika fitokonana avokoa ireo namana miasa any amin�ny faritra.
Zara raha misy mpampianatra miasa
Na dia voalaza aza fa miasa avokoa ireo mpampianatra manerana ny Faritra Vakinankaratra dia toa tsy izany ny zava-misy rehefa midina any amin�ireo Cisco manodidina.
Tsy mety hita ny fanafody
Tsy misy fitsaharana ny fipoiran�ny fitakiana etsy sy eroa.